जेष्ठ ०३, २०७७ २१:२६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो निकै भाइरल भइरहेको । भिडियोमा केही युवाले सडकमा गुडिरहेको एक गाडीलाई रोकेर सोधपुछ गरिरहेको देखिन्छ । गाडीमा एक पुरुष र एक महिला स्वाथ्यकर्मी यात्रा गरिरहेका थिए । युवाहरुले कडा शब्दमा तपाईको झोला देखाउनुहोस् । मास्क किन नलगाएको भन्दै ? केरकार गरेको देखिन्छ । गाडीमा सवार स्वास्थ्यकर्मी निरीह बन्दै युवाहरुले जे–जे भन्यो त्यही मानिरहेको देखिन्छन् ।
त्यो भिडियो सामाजिक सञ्चालमा सेयर गर्दै यस्तो बेलामा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने अधिकार ती युवाहरुलाई कसले दियो ? तीनलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता आवाज उठाएका छन् ।
आखिर के थियो घटना को थिए ? को थिए स्वास्थ्यकर्मी ? अनि उनीहरुलाई कडासँग केरकार गर्ने युवाहरु को हुन् ?
गृह मन्त्रालयले तथा स्थानीय प्रशासनहरुले जारी गरेका नियममा लकडाउनका बेला स्वास्थ्यकर्मीका लागि यात्रा गर्न पास नचाहिने उल्लेख गरिएका छन् । कोरोना महामारीका बेला फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई केही व्यक्तिको झुण्डले कुरै नबुझी अवरोध गर्दा स्वाथ्यकर्मीको मनोबल गिराउँछ । प्रहरी प्रशासनले किन केही गरेन ? काममा हिडेका स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्व्यवहार गरी फर्कन बाध्य पार्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ की पर्दैन ? सामाजिक सञ्जालमा त्यो भिडियोमाथि यस्तै प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।
विषेश काम परेकाबाहेकलाई घर बाहिर निस्कनसमेत नदिइएको लकडाउनका बेला उनीहरुलाई नाकामा बसेर चेकजाँच, केरकार गर्ने अधिकार कसले दियो ? उक्त घटनाको निस्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्न हेल्थपाटी डटकम सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।